Trano ao Antsirabe I : maro ny fanorenana tsy nahazoana alalana ara-dalàna | NewsMada
Trano ao Antsirabe I : maro ny fanorenana tsy nahazoana alalana ara-dalàna
Par Taratra sur 04/02/2016
« Foana hatreo ny gaboraraka amin’ny fanorenan-trano tsy nahazoana alalana ». Izany no fanambarana nataon’ny sekretera jeneralin’ny kaominina Antsirabe I, Razafindrazaka Ravolalaina, nandritra ny dinik’asa niompana tamin’izany ary natao tao amin’ny tranompokonolona Antsenakely Antsirabe ny herinandro lasa teo. Hita tokoa mantsy hatramin’izay ela izay fa miorina etsy sy eroa ireo trano lehibe sy madinika. Maro amin’izy ireny, sady tsy nahazoana alalana ara-dalàna ny fanamboarana no eny amin’ny toerana tsy tokony hanorenana no misy azy.
Tsy voahaja mihitsy ny rafi-panajariana ny tanàn-dehibe. Tsy ampy, na tsy misy mihitsy koa ny fanamarinana sy ny fanaraha-maso ataon’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny sampana teknika ao amin’ny kaominina, nefa tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara ny renivohitr’i Vakinankaratra !
Manomboka izao izany, tsy maintsy mahazo alalana ara-dalàna izay rehetra hanorina trano, na lehibe na kely, araka ny fanambarana nataon’ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina, niarahana tamin’ny sampandraharahan’ny fananan-tany sy fandrefesan-tany, ny “architèque” ary ny mpiandraikitra ny fanajariana ny tanàn-dehibe. Iharan’ny sazy henjana ny mifanohitra amin’izany ary ho hentitra tokoa ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ataon’ny kaominina sy ireo sampandraharaha ara-panjakana misahana izany ao an-toerana.
Fanapahan-kevitra nivoaka tamin’ny dinikasa aloha izay, fa ho hita eo ny tena fampiharana azy. Tsy lalàna vaovao ny fangatahan-dalana amin’ny kaominina raha hanorina trano, saingy odian-tsy hita izany hatramin’izay noho ny kolikoly efa mahazo vahana hatraiza hatraiza.